Kik Spy App - Track and Monitor Kik Messenger Chat Izingxoxo
I-Kik Monitoring Software - Hlola ku-Chat Messenger Chat kanye Nonke Ingxoxo
Landelela i-Kik Messenger njengabazali ku-Kik ngaphandle kwazo zonke izingozi ze-cyber ezibhekene nezingane zakho. Abazali kufanele baqonde isimo esibucayi esithinta uhlelo lokusebenza lokuxhumana nabantu ngoba izingane ezincane ziyayisebenzisa eziningana emhlabeni jikelele.
Hlola i-Kik Messenger nge-TheOneSpy
Kuyinto uhlelo lokusebenza oluthandwa kakhulu phakathi kwezingane ezincane, kodwa Uhlelo lokusebenza lomyalezo osheshayo lulawulwa yizilwane ezithuthumayo ngokusetshenziswa kabanzi ukuzingela abangenacala. Bangathumela imiyalezo enobungane ezinganeni futhi wenze ubudlelwane obuseduze ekuqaleni ukuze bathole ukwethemba kwabo. Uma bekhona unqobe ukwethemba kunokuba kungalimaza izingane ezingazazi.
Yiba iMalician futhi wenze Izimangaliso ngeTheOneSpy KiK Spy App
Buka imilayezo ethunyelwe futhi yamukelwe
Landelela amafayela we-multimedia njengezithombe, amavidiyo, izitika, ne-Emojis
Indlela Yokuhlola Ngokuyimfihlo KIk Messenger Via TheOneSpy Control Panel?
Vula isiphequluli bese ubhala ngosizo lwekhi pad cp.theonespy.com kudivayisi yakho. Uzokwazi ukufinyelela ku-panel ye-TheOneSpy yokulawula. Manje ungabona "Izinsizakalo zami" futhi uthephe kuso. Ungaba nemenyu ngakwesokunxele kwesikrini sakho sefoni yeselula. Yenza uchofoze kwi-IM's logs bese usetha ama-Kik logs. Ngemuva kwalokho, uzokwazi ukubuka izingxoxo ze-kik nemiyalezo.
Hlola ku-Kik Chat:
Ukuze uthole ukucaciswa okwengeziwe, ungabona ithebhu yengxoxo ye-Kik. Chofoza kuwo futhi uzobona okucacile indlela yokuhlola yengxoxo ye-Kik kanyekanye.
Yiziphi Izici Ezinamandla Zokuqapha esizinikeza nge-Kik Spy Software?
Kungani Ufuna I-OneSpy Kik Messenger Spy Application?
Abantu abangaba yizigidi eziyizinkulungwane ezingu-2.7 basebenzisa iKag isithunywa ngesikhathi okwamanje kuwo wonke umhlaba. Ochwepheshe bathi wonke umsebenzisi ngamunye uchitha cishe amaminithi angu-30 ohlelweni lokuthumela imiyalezo futhi 38% umsebenzisi kukhona intsha encane kanye nezingane.
Kuyadume kakhulu izingane ezincane kanye ne- Uhlelo lokusebenza lomlayezo womphakathi lenza umsebenzisi afihle ubunikazi bakhe okwenza ababi a isiphephelo sezilwane zobulili kanye nabahlukumezi ngokocansi.
Into esabekayo ye-Kik isithunywa ukuvimbela lokho Ukuthumela i-sexting kuyanda kule lokusebenza akukho isikhathi ngaphambili.
Esikhundleni sokuthumelelana imiyalezo, ukucuketfwa kwenyama kanye nobuqili ezithombeni nakumavidiyo kuhamba kuwo wonke ikhasi elilodwa.
TOS uhlelo lokusebenza lokuqapha isithunywa kuvumela abazali ukuba setha ukulawula kwabazali kulolu hlelo lokusebenza oluthile lokuxhumana nabantu. TheOneSpy kik umyalezo spy kwenza ngisho nabazali kuzo zonke izithunywa ezisheshayo ezihamba phambili.